Tombony azo avy amin'ny fakan-tsarimihetsika vita amin'ny vatana ho fampiharana ny lalàna - Vahaolana OMG
Tombontsoa azo avy amin'ny fakantsary azo alaina amin'ny fahazoana lalàna
Ny fahazoana porofo amin'ny alàlan'ny firaketana mivantana dia tena nanampy tamin'ny fanovana ny fomba iatrehana ireo raharaha sy heloka bevava. Ny rafi-pitsaràna heloka bevava izao dia toa misy porofo maro kokoa hialana amin'ny fitsarana, ny fakantsary saron-tarehy dia toa ny mason-jaza fanampiny izay mirakitra hetsika hiseho amin'ny manaraka. Ny fakantsary raisina miovaova tampoka dia lasa teknolojia avo lenta vaovao izay nanampy tamin'ny polisy hamahana ireo raharaha. Taorian'ny volana vitsivitsy niasana, dia nahavita nanakorontana ireo tranga herisetra an-trano maro ny masoivoho mpampihatra lalàna. Olana foana ny hahazoana testifier momba ny raharaha misy herisetra an-tokantrano, te-hitory foana ny olona amin'ny zavatra hitany ny zavatra hitany. Saingy miaraka amin'ny fakantsary fiakanjoam-batana, voarakitra daholo ny zava-drehetra ary noho izany ireo horonantsary ireo dia ampiasaina kokoa hanondroana fa misy zavatra diso.
Ireo horonantsary horonantsary avy amin'ny fakan-tsary amin'ny vatana dia ampiasaina ihany koa hanampiana amin'ny fanenjehana ireo mpamily mamo, raha vao tratra ny meloka iray ary tazonina hatrany mandra-pahafatin'ny fisotroana azy. Aseho azy ireo ilay horonantsary mba hanaporofoana azy ireo fa diso ny zavatra nataony. Azo jerena amin'ny sivily hafa ihany koa ilay horonantsary mba hanampiana azy ireo hahita haingana. Ireny fakan-tsary ireny dia ampiasaina ihany koa hamolavola ny fijanonan'ny mpamily manana fahazoan-dàlana nampiatoana na lany daty. Ireo horonantsary avy amin'ity fakantsary ity ihany koa dia azo ampiasaina avy amin'ny fampahafantarana tarehy eo amin'ny sehatra.
Ny fakantsary vita amin'ny vatana
Ny endri-javatra sasany amin'ny fakan-tsary mitazona vatana dia kely ary mora entina. Izy ireo dia fitaovana namboarin'ny mpiasan'ny lalàna indrindra mba handrenesana ny fifandraisany amin'ny vahoaka, ireo fakantsary fitaoman-doha ireo dia afaka mamokatra horonantsary sy fandraisam-peo. Ny sasany dia mamorona firaketana an-tsoratra fotsiny, fa alefa tsikelikely. Ireo horonantsary ireo dia matetika voatahiry amin'ny tahiry eo an-toerana na azo alaina amin'ny Internet miaraka amin'ny sehatra an-tserasera misy tranonkala an-tserasera mankany amin'ny toerana fitahirizana hafa. Izy ireo dia tsy mitovy amin'ny fakan-tsary dashboard satria raikitra ireo ary tsy mirakitra ny toerana rehetra misy mpiandraikitra. Ny fakan-tsary mihetsika amin'ny vatana dia miovaova amin'ny endrika iray:
Ny fiainan'ny aina
Fahazavana famatsiana fihodinana
Miakatra ny fotoana
Fampandrenesana mialoha ny hetsika
Ireto manaraka ireto dia fanatsarana hita avy amin'ny fampiasana fakan-tsary mifono vatana amin'ny masoivoho fampiharana:
Ny fahalemena amin'ny finiavana
Ny masoivoho fampiharana ny lalàna dia mandany be dia be mba hahazoana io fitaovana firaketana io matetika eo anelanelan'ny $ 700 sy $ 900 tsirairay. Amin'ny alàlan'ny firaketana ny fomba ifandraisan'ireo mpandraharaha lalàna amin'ny sivily, ny masoivoho dia afaka maneho amin'ny vahoaka fa mangarahara izy ireo amin'ny fifandraisan'izy ireo. Tena zava-dehibe tokoa amin'ny fisavana tranga misy eo amin'ny sivily iray sy ny manamboninahitra, manjary mora foana izany hanaporofoana fa tsy manan-tsiny na fanamelohana ny manampahefana toy izany. Ny fananana firaketana horonantsary dia tena manampy ny mpampihatra lalàna mba hanangona porofo ary koa ireo vavolombelona nanadihady. Ny fananana sarimihetsika manokana dia matetika mihoatra noho ny ampy hampandehanana raharaha ho tianao. Ireo karazana fakan-tsary mitazona amboarina dia azo ampidirina amin'ny solomaso, mikrô amin'ny onjam-peo na miraikitra amin'ny akanjon'ny manamboninahitra. Ho fanadihadihana izay tokony hataon'izy ireo dia ny fapetraha io fakantsary io mba hisintonana ireo horonan-tsary, ny horonan-tsary dia miasa raha toa ka ny fandefasana ny porofo sary dia mandeha tsara na dia azo alaina sary.
Mampikatroka ny fitarainan'ny besinimaro
Ny fananana porofo ahafahana manamarina ny manampahefana iray voampanga no tena zava-dehibe, dia tena nahatanteraka an'izany andraikitra izany ny fakantsary fiakanjoam-batana. Afaka namaha ny anaran'ny manamboninahitra marobe izay nisy raharaha nanohitra azy ireo toy ny fampiasana fiteny tsy ilaina sy ny fampiasan-kery tsy ilaina. Nisy ny fihenan'ny fitarainana natao tamin'ny polisy taorian'ny nisian'ny fakan-tsary mifono vatana. Vantany vao manao fitarainana ny olona ary aseho an-tsary tena izy dia mandeha fotsiny izy ireo ary tsy miverina, satria efa nesorin'ny porofo horonantsary dia lasa tsy fahendrena ny manery bebe kokoa. Vao mainka nahatonga ny manampahefana ho lasa matihanina kokoa amin'ny fanatanterahana ny andraikiny izy ireo satria misy foana ny hoe "Voahambina aho" na "azo jerena ity porofo ity" Ny vidin'ny fakan-tsary dia nividy toe-javatra fandresena ho an'ny rehetra . Matetika dia lazaina fa ny sary iray dia mitentina an'arivony ny teny raha toa ka izay dia misy vidiny an-tapitrisany sahady.
Antony lehibe miantso ny fampiasana fakan-tsary vita amin'ny vatana:
Fanatsarana ny fiarovana ny polisy
Fampitomboana ny kalitaon'ny porofo
Ny fampihenana ny fitarainan'ny sivily
Ny fampihenana ny andraikitra amin'ny masoivoho
Tsy sarotra ny mahita hoe fanampiana firy no nomen'ny fakantsary raikitra ho an'ny masoivoho mpampihatra lalàna raha oharina amin'ny fotoana tsy nampiasana ireo fakan-tsary niakanjo vatana, be dia be ny tranga niampangana an'ireo manamboninahitra. Tsy nisy fomba foana hanaporofoana fa tsy manan-keloka na diso izy ireo. Ny fakantsary vita amin'ny vatana dia mety ho fanciful imbetsaka hatramin'ny niarahanay niarahana fa misy karazana fakantsary ireo dia afaka miraikitra amin'ny toerana hafa izay misy ny valahany sy ny solomaso.
Voamarika ihany koa fa eo amin'ireo masoivoho izay tsy nahazo ny "fakantsary vita amin'ny vatana" ny antony voalohany nomena azy dia; Ny sandan'ny fividianana, ny fikojakojana ary ny vidin'ny fitahirizana farany dia tena tsy mampino, somary tsy azo ihodivirana ho azy ireo izany.
Ny teboka farany tokony marihina momba ny fakan-tsary mifehy ny vatan'olona dia ny olan'ny tsiambaratelo, tsy afaka mijery fotsiny ianao miaraka amin'ny fakantsary fakana sary na ny dinidinika rehetra. Azo raisina ho toy ny fanitsakitsahana ny fiainana manokana izay mety hitarika ho hitarihana any amin'ny fitsarana. Ny zava-dehibe dia mandalo fiofanana ampy ary mamaky ny lalànan'ny fanjakana hahalala izay tokony hatao sy tsy tokony hatao. Ny tranga sasany momba ny fanitsakitsahana ny fiainana manokana dia alefa any amin'ny fitsarana, ary porofo avy amin'ny fakantsary mitovy. Ny fakan-tsary mihetsika ho an'ny vatana dia mila ny fanazaran-tena hampiasana tsara nefa tsy manahirana. Matetika ny hery ataon'ny polisy dia tokony hanao programa fampiofanana ho an'ny fampitaovana araka ny tokony ho izy sy ny teknolojia, ny fanofanana dia tsy fanimbana mihitsy.
Tombontsoa azo avy amin'ny fakantsary azo alaina amin'ny fahazoana lalàna no farany niova: Oktobra 10th, 2019 by Admin